စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဓာတ်ဆီထက် ဈေးနှုန်းသက်သာသော LPG ကို တက္ကစီအ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဓာတ်ဆီဈေးထက် ဈေးနှုန်းသက်သာသော LPG ကို ပထမဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် တက္ကစီအစီး ၅ဝဝဝဝ ကျော်တွင် အစားထိုးသုံးစွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေးစည်း ကမ်းချက်များချမှတ်နိုင်ရန် လေ့လာကြိုးပမ်းနေကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦး အောင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
ဇွန် ၇ ရက်က ကျင်းပသည့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးတွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် ယင်းကဲ့သို့ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဦး ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင် မြင့်က” LPG ကို နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတဲ့အခါမှာ အရည်အ သွေးညံ့တာကို တင်သွင်းခွင့်မပြုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် ထိန်းချုပ်တာကလွဲလို့ ဒီလိုပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် တင် သွင်းတဲ့လူတွေက ဒီအပေါ်မှာ လိုက်နာပြီးတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် သေသေချာချာဆာဗေးလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ အရမ်း လောကြီးပြီးလုပ်လိုက်ရင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုတာ ထုတ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်ဆင်ရခက်ပါတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငွေကြေးအရင်း အနှီးများနဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ တက္ကစီအစီး ၅ဝဝဝဝ ကျော်အတွက် LPG ကို တင်သွင်းပြီးဖြန့်ဖြူးသွားနိုင်မလားဆိုတာကို လေ့လာတဲ့အဆင့်ပဲရှိ ပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အများကြီးလိုပါ သေးတယ်။ သူ့အတွက်က ဆိုင်တွေလည်း အများကြီးလိုတယ်။ အ ဆောက်အအုံနေရာတွေလည်းအများကြီးလိုတယ်။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ စည်းကမ်းချမှတ်ဖို့ လေ့လာနေတဲ့အဆင့်၊ ကြိုးပမ်းနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်”ဟု ပြောသည်။
LPG ကို မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုကို ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်က ကာလအချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ဖူးပြီး ယင်းအချိန် ကာလတုန်းက ကပရယာဉ်၊ တက္ကစီယာဉ်စသည်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ထောင်နှင့်ချီပြီးအသုံးပြု ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ်က LPG အသုံး ပြုမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိရှိ ခဲ့သလို နောက်ပိုင်းတွင် LPG ကို မီးဖိုချောင်တွင် ရေရှည်အားပေး အသုံးပြုလာသည့်အတွက် LPG ကို အိမ်သုံးအဖြစ်သုံးပြီး လောက်ငမှသာ မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုမည်ဟု ရည်မှန်းခဲ့သဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များတွင် LPG တပ်ဆင်သုံးစွဲမှုအား ခဏရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ‘ LPG conversion Kit များတပ်ဆင်ပြီး သုံးရင်အဆင်ပြေ လောက်တယ်လို့ စဉ်းစားပြီးတော့ လေ့လာနေပါတယ်။ LPG conversion Kit တစ်ခုတပ်ရင် ဘယ် လောက်ကုန်မလဲ။ ဓာတ်ဆီကုန်ရင် ဓာတ်ဆီထည့်လိုက် LPG ကုန် ရင် LPG ထည့်လိုက်၊ ဒီလို Kit မျိုးတွေပေါ့။ နှစ်ခုစလုံးထည့်လို့ရတယ်။ ကြိုက်သလိုထည့်လို့ရတယ်။ ကြိုက်သလိုမောင်းလို့ရတယ်။ Version လေးချိန်းလိုက်ရုံပဲ။ ဒါလည်း ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားလို့ရတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးမှုအနေဖြင့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှစ်ခုမှ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်လလျှင် မက်ထရစ်တန် ၅ဝဝဝ ခန့်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ ပြီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်တစ်လလျှင် မက်ထရစ်တန် ၆ဝဝဝ ခန့်တိုးတက်ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ” CNG သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ဖိအားမြှင့်ထားတာပေါ့။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သီးခြားပေါ့။ LPG က ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ LPG ကို နိုင်ငံခြားမှတင် သွင်းဖို့ လိုင်စင်နှစ်မျိုးထုတ်ပေးထားပါတယ်။ (လိုင်စင် က၊ခ) LPGက ရေလမ်းကနေတင်သွင်းလိုင်စင်(က)က အရင်တုန်းက LPG ကို ရေလမ်းကမတင်သွင်းခင်တုန်းက ပုဂ္ဂလိကတွေမရှိခင်တုန်းက မြဝတီနယ်စပ်မှာ မြန်မာပြည်သို့ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့တာရှိပါတယ်။ သူက ကုန်းလမ်းကနေ တင်သွင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုင်စင် (ခ)ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု အလံအဖြစ် အနီရောင် နောက်ခံနှင့် ရွှေဝါရောင် ဟင်္သာဖိုပုံပါ အလံကို ပြည်?
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါ ၃၇၃ ဦးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သုံးဦး သေဆုံးခဲ့ဟ?
မကြာခင်မှာ လက်ထပ်တော့မယ့် မင်းသမီး မန်ဒီမိုးရ်
ကမ္ဘာ့ဖလား ရမည်ဆိုပါက ဘာစီလိုနာ၏ ဖလားတစ်လုံးနှင့်ပင် မက်ဆီ လဲလှယ်နိုင်
မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ပြည်ထောင်စုလမ်းတွင် လမ်းခံနိုင်ဝန်ထက် တန်ပို တင်ဆောင်သွားလာနေသော ကုန်တင်ယာ
လက်ရှိစာရင်းအရ ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူ သုံးသန်းကျော်ရှိဟုဆို